चिनियाँ खानाको वास्तविकता – के चिनियाँहरू सर्वाहारी भएकैले कोरोना फैलिएको हो ?
कोरोना भाइरसका कारण त्रसित विश्वले यसलाई ‘चाइना भाइरस’ नाम पनि दिए तर विश्वसामु चिनियाँहरूले यसको रोकथाम र नियन्त्रणमा उदाहरण नै प्रस्तुत गरेर अब्बल भएर देखाए ।
सबैको मानसपटलमा चिनियाँहरू जे पनि खाने सर्वहारी भएका कारण यो संकट निम्तिएको भनेर अपहेलनाको हिसाबले हेरे तर वास्तविकता त्यस्तो छैन । जङ्गली जनावरबाट कोरोना भाइरस सल्किएको हुनसक्छ भन्ने मात्र अन्दाज हो तर अहिलेसम्म प्रमाणित भएको छैन ।
के साँच्चै चिनियाँहरूले जे पायो त्यही खाने गरेर विश्वबाह्र कोरोना फैलिएको हो त ? हामीले चिनियाँहरूको मौलिक खानाका बारेमा अध्ययन गर्न जरुरी छ ।
अहिले नेपालमा हामीले चिनियाँ भनेर खाएका कुनै पनि खानाहरू चीनको मौलिक खाना होइन, यो त इन्डो-चाइनिज खाना हो । भारत घुम्न जाने चिनियाँहरूले आफ्नो खाना त फिँजाए तर इन्डियनहरूले यसलाई फ्युजन गरेर भारतीय स्टायलमा लगे र एसियाभर फिँजाए ।
चिकन चिल्ली, पनिर चिल्ली, बफ चिल्ली, मन्चुरियन लगायत धेरै खानाहरू भारतीयले आफ्नो स्वादमा ढालेका खानाहरू हुन् । यी चिनियाँ मौलिक खाना होइनन् तर पनि धेरैले मन पराएर चाइनिज खाना भनेर खान्छन् ।
नेपालमा चिनियाँ मौलिक खाना खुवाउने रेस्टुरेन्टहरू धेरै न्यून छन्, चिनियाँ खानाहरू मास्टर सेफले मात्र तयार गर्न सक्छन् ।
चीनको विकासले विश्वको ध्यान तानो छ । हरेक क्षेत्रको विकासमा चुलिएको चीन पाक-शिक्षामा संसारमा निकै अगाडि छ । चिनियाँ खाना आफ्नो देशमा मात्र लोकप्रिय नभएर संसारभर छाएको छ । चीन यस्तो देश हो जहाँ हरेक राज्यमा आ-आफ्नो मौलिक खाना छ । चिनियाँ खाना कुनै अत्यन्त पिरो हुनु र कुनै खाना पूर्ण सादा हुनु पनि राज्य अनुसारको खाना फरक फरक हुनु हो ।
के चिनियाँहरू के सर्वाहारी हुन् त भन्ने सबैको जिज्ञासा रहन्छ यो प्रश्नको उत्तरका लागि हामीले चिनियाँ खानाको इतिहास खोतल्नु पर्छ । कुनै समय त्यहाँको जनसंख्या अत्याधिक थियो, उनीहरू बाँच्नकै लागि पनि पृथ्वीको जमिन र समुन्द्रमा पाइने हरेक जीवजन्तु, वनस्पती खान थाले ।
यसैले त्यहाँको संस्कारको रूप लिँदै गयो जसका कारण अहिले पनि विकसित रूपमा परिणत भइसक्दा पनि त्यो प्राचीन संस्कार रहिरह्यो । हुन उनीहरूले नखाने भन्ने केही छैन । चीनमा धेरै जनता नास्तिक हुनाले उनीहरूले कुनै खानामा भेदभाव राख्दैनन् ।
मुख्यत: चीनमा ८ रिजनल प्राचीन र मौलिक खानालाई विश्वभर मान्यता दिइएको छ । सिचुवान कुजिन, हुनान कुजिन, क्यान्टोनिज कुजिन, फुजीयन कुजिन, जेजियाङ कुजिन, यानयुइ कुजिन, जिन्सु कुजिन, सनडोङ् कुजिन गरी विभाजन गरिएको छ ।
के-केछन् तचीनका ८ रिजनल कुजिन (व्यन्जन) ?
८ ग्रेट कुजिनहरूको आ-आफ्नै मौलिक विशेषता छ । गुवनडोङ अर्थात क्यान्टुनिज कुजिनमा केही गुलियो, फ्लेवरफुल सस सहितको हुन्छ । यो प्रोभिन्सको खाना सी-फुड र राइस निकै प्रचलित छ । हङकङका बासिन्दाहरूले यो खाना निकै चाखसाथ खाने गरेका छन् ।
क्यान्टोनिज कुजिन सादा, ताजा र हल्का गुलियो पनि हुन्छ । यो कुजिनमा अदुवा, अनिसेड, धनिँया, राइस भिनेगर, ओस्टर सस, होइसिन सस, चिनी प्रयोग गरिन्छ । चाइनिज स्टीम एग, डिमसम, चार सिउ(बार्बेक्यू पोर्क), ह्याट कट चिकन, क्यान्टोनिज स्टाईल पोरिज, होइसम (सी कुकुम्बर), सार्क फिन सुप, ओरेन्ज कटल फिस, टी स्मोक डक यो कुजिनमा पर्ने खाना हुन् ।
सिचुवान कुजिन पिरो, अदुवा, लसुन, बदाम, सिचुवान पेपर, बिन चिल्ली पेस्ट, छ्यापी, खुर्सानीको पर्याप्त प्रयोग गर्ने कलरफुल खाना मानिन्छ । अन्य चाइनिज कुजिनमा सिचुवान पेपर(टिमुर)को विरलै प्रयोग गरिन्छ । मापो टोफु, कुङपाउ चिकन, सिचुवान हट पट यि कुजिनमा पर्ने केही प्रसिद्ध खाना हुन् ।
जिन्सु कुजिन पनि माइल्ड र प्राकृतिक हुन्छ । वाटरमेलन चिकन, बोएल डक, स्वीट एन्ड सावर मन्डारिन फिस, फायर साइड ब्रोथ, डक वार्प सार्क फिन यो कुजिनका प्रमुख खानामा पर्छन् ।
फुजियन कुजिनलाई चीनको मेन कुजिनको रूपमा मान्यता दिइन्छ । यो कुजिनमा पनि स्विट एन्ड सावर नै मुख्य स्वाद मानिएको छ । चीनको साउथ प्रोभिन्स फुजियनको यो कुजिन ५ हजार बर्ष पुरानो इतिहास बोकेको मौलिक खाना मानिन्छ । बुद्ध जम्पिङ वाल, ताइची प्राउन, हट एन्ड सावर स्कुट, स्लाइस चिकन विथ रेड फर्मेन्टेड राइस, स्ट्यु चिकन विथ थ्री कप सस, स्टीम फिस यो कुजिनका प्रमुख खाना हुन् ।
हुनान कुजिन पनि निकै प्रचलित मानिएको चिनियाँ मौलिक खाना हो । जसलाई जिङ कुजिन पनि भनेर चिनिन्छ । हुनान प्रदेशको प्रचलित मौलिक खानामा पिरो, अमिलो, नुनिलो, फ्लेवार फुल, स्मोकी र स्टिर फ्राइड खानाहरू पर्दछन् । स्टीम ह्याम्स, पोर्क सुप, स्पाइसी चिकन, स्टीम फिस विथ स्पाइसी रेड पेपर, मनी फिस, रेड रोस्टेड सार्क फिन, सुगर क्यान्डी लोटस आदि पर्छन् ।
अन्हुइ कुजिन पनि चीनको एक प्रमुख खाना हो । हिमाली तथा पहाडी खानाको रूपमा प्रचलित यो मौलिकता बोकेको चिनियाँ खाना हो । छाताको मुनी बसेर खाने यि स्ट्रिट खानाहरू मौलिक र ग्रामीण हुन्छन । स्थानीय इन्ग्रीडीयन्ट प्रयोग गरेर तयार गरिने यी खानाहरू स्वास्थ्यवर्द्धक पनि मानिन्छ । जङगली च्याउ र सुंगुर, बङगुर यो प्रोभिन्सको प्रमुख खाना मानिन्छ । माउन्टेन ब्याम्बो सुट, पोर्क विथ लोटस लिफ, पिकलेड मन्डारिन फिस, अन्हुइ स्टायल ब्रेज्ड पोर्क, हाइरी टोफु, वान्टन विन क्यान्डी, क्र्याबसेल, प्यानकेक आदि यहाँका प्रमुख खाना मानिन्छन् ।
सानडोङ् कुजिन पनि चीनको अर्को चर्चित मौलिक खाना हो । यो प्रदेश चीनको सबैभन्दा पहिलेको सभ्यता भएको प्रदेश मानिन्छ । सामुन्द्रिक खाना बढी रुचाउने यो शहरमा केही मात्रमा पोर्क र सब्जी पनि खानामा समावेश छन् । मैदाको स्टीम बन यो प्रदेशमा सबैले खाने कमन खाना मानिन्छ । स्टीम पोर्क हक, स्टीम डाइस पट पोर्क, मिल्क सस विथ लङ्स, फोर जोए मिटबल, चिकन विथ मिल्क सुप, डेजहोउ ग्रिल चिकन र सामुन्द्रिक विविध खानाहरू यो कुजिनका प्रमुख खाना मानिन्छ ।
झेजियाङ कुजिन पनि चीनको निकै प्रमुख मौलिक खाना मानिन्छ । झेजियाङ कुजिनमा मौसमी सब्जी, सामुन्द्रिक खाना बढी प्रयोग गरिन्छ । दाङपो पोर्क, ब्रेज्ड ब्याम्बो सुट, डीप फ्राइड बिनकड, लोटस रुट विथ स्विट सस, बेगर चिकन, ब्रेज्ड ह्याम विथ हनी सस, लेक बिफ सुप, पोर्क राइस प्लोर लोटस लिफ, आदी यो प्रोभिन्समा खाइने खाना मानिन्छ ।
र अन्तमा हुनान र सेच्वान पिरो खाना, एनहुइ र फुजियन हिमाली तथा पहाडी खाना, सान्डोङमा ताजा, नुनिलो र अत्यधिक सामुन्द्रिक खाना, फुजियन, कन्टोनिज, झेजियाङ, सामुन्द्रिक खाना गुलियो र लाइट किसिमको हुन्छ भनी हामीले सहज अन्दाज गर्न सकिन्छ ।